Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Bulsho / Wararka
Nur: Centerku kama soo horjeesanayo todobaadka qoyska
Mon, 20 Sep 2021 17:26:00 GMT+2
Dowladda ayaa maanta soo bandhigtay miisaaniyad ay u qoondeysay todobaadka qoyska. Ujeddada todobaadka qoyka waa inuu waalidka dhalay carruurta ay da’doodu u dhaxeyso 4 ilaa iyo 16 sanno guriga joogi karaan lix maalmood. ”Tani waxay ka mid tahay waxyaabaha uu xibiga Socialdemokraterna doorashada uga qeyb galayo”, ayuu yiri Mohamad Nuur, siyaasi ka tirsan Socialdemokraterna.
Xisbiyada mucaaradka oo dhaleecayay miisaaniyada dawladda
Mon, 20 Sep 2021 16:21:00 GMT+2
Dhowr xisbi oo ka tirsan mucaaradka ayaa dhaleecayey miisaaniyada dawladda. Dawladda ayaan hadda haysanin taageero ku filan si loo dhabeeyo miisaaniyada. Xisbiyada C iyo V ayaa sheegay in aaney weli go'aamin in ay taageeri doonaan iyo in kale.
Shan bilyan oo loogu talo galay daryeelka caafimaadka
Shan bilyan oo dheeraad ah. Waa inta lacag ay dawladdu ku maalgelin doonto daryeelka caafimaad sannadka dambe. Sidaas ayaa laga ogaaday shir saxaafadeed halka ay wasiirada maaliyada dalkan Magdalena Andersson ku soo bandhigtay miisaaniyada dawladda. "Wakhtigii aanu ku jirnay corona ayey caddaatay in gababsi ku jiro daryeelka", ayey sheegtay wasiiradu.
Caruuraha oo laga talaali doono covid-19
Fri, 17 Sep 2021 14:47:00 GMT+2
Shalay ayey dawladdu go´aamisay in caruurta ay da´doodu u dhaxeeyso 12 jir ilaa 15 jir la siiyo talaalka covid-19. Taas ayaa ka dhigan in aaney Iswiidhan raaci doonin talada dalka Norway oo ah in la siiyo caruurahan hal talaal keliya. In kasta oo ay caruurto u dhaga nugleeyn xanuunka covid-19 ayey Iswiidhan tiro ka badan 200 si khatar ah ugu xanuusadeen.
Ismahaan: "Meeshan mugdi iyo qabow ayaan qaati uga joogaa"
Fri, 17 Sep 2021 14:54:00 GMT+2
Weli waxaa halkoodii inooga socda barnaamijyadii la xiriiray booqashadii ay laanta idaacaddu ku tagtay degmada Boden oo dhacda waqooyiga dalka Sweden. Waa maxay haddaba dhaliisha ay Ismahaan ka qabto degmada Boden? "Hayadda socdaalka ayaa muddo sagaal sannadood ka horreeysay ii doortay inaan deegaan ka dhigto degmada Boden, sida ay sheegtay Ismahaan Cabdinasir Axmed.
Iswiidhan oo maclumaad sir ah la qeeybsan karta waddamo kale
Fri, 17 Sep 2021 12:28:00 GMT+2
Dawladda ayaa rabta in ciidamada sirdoonka ee waddamada kale la siiyo oggolaasho in ay maclumaad sir ah ka helaan heeyada FRA iyo heeyada sirta militariga. Sido kale ayey dawladdu u jeeda in loo baahan yahay in FRA la siiyo fursad ay teleefaada ku dhageeystan. Hindisahan ayaa barlamaanka loo gudbiyay.
Dacwad ooge dhaleeceysay muddada dhalinyaradda lagu hayo dembi baarista
Thu, 16 Sep 2021 14:14:00 GMT+2
Dacwad ooge Linda Wiking oo baaraysa dilkii askariigii dhawaan Göteborg lagu dilay loona soo xiray wiil 17 jir ah ayaa dhaleeceeysay sharciga cusub ee dhawaan soo baxay. Sharciggan ayaa diidaya in dembi baarista lagu hayo intii la doono eedeysanayaasha dadoodu ka yar tahay 18 sanno. "Waxaan daryeeynaa halis ah in eynaan siddii hore dambi dhacay u baari karin" ayey tiri Linda Wiking.
HINDISE lagu dooneyo in kor loo qaado gunadda bukaanka iyo howl gabka
Thu, 16 Sep 2021 12:42:00 GMT+2
Dowladda ayaa hadda dooneeyso in miisaaniyada sanadka soo socda la kordhiyo gunadda la siiyo qeybo ka mid ah bulshadda. Dadkaa ayaa waxaa ka mid kuwa la siiyo gunnada bukaanka iyo howl gabka sida uu soo jeediyey wasiirka Caymiska Bulshadda Ardalan Shekarabi. Wasiirka ayaa doonaya in gunaddaaasi loo kordhiyo 1000 kr bishii iyo guri kabka oo laga saacido.
Way ka sahlan tahay in degmooyinka yaryar wax laga barto
Fri, 17 Sep 2021 13:32:00 GMT+2
Dalka waxaan soo galay 2011-kii anigoo la igu keenay nidaamka qaxootiga dibadda laga soo qaado. Yaraan ayaan kaga soo qaxney Soomaaliya, markuu dagaalkii sokeeye dhacay. "Mustaqbalka waxaa ugu muhiimsan in aan ilmahayga sawir wanaagsan u noqdo", sida uu sheegay Cabdi Maxamed Ibraahim oo ku dhaqan degmada Boden.
Löfven oo dhaleecayey xisbiyada mucaaradka
Wed, 15 Sep 2021 14:53:00 GMT+2
Doodi barlamaanka maanta ayuu ra´iisal wasaare Stefan Löfven dhaleecayn u gudbiyay xisbiyada mucaaradka Moderaterna iyo Kristdemokraterna. Sababta oo ah in ay rabaan in ay wadashaqeeyn la yeeshaan xisbiga Sverigedemokraterna. "Waa laba mid amba albaabka loo xidhi karaa in lala shaqeeyo SD, amba waxa la taageeri kara isku xidhnaanta bulshadeena", ayuu sheegay
Xoghayaha xisbiga SD oo shaqada sii wadi doona
Wed, 15 Sep 2021 11:59:00 GMT+2
Xoghayaha xidbiga Sverigedemokraterna Richard Jomshof ayaa sheegay in uu xilkiisa sii wadi doono. Sidaas ayaa laga ogaaday wareeysi uu la yeeshay laanta Ekot. "Sannadka dambe ayaan joojinaya shaqadan, laakiin hadda waxaan dareensanyahay in aan haysto taageerada Jimmie Åkesson", ayuu sheegay.
LÖFVEN: ''Waxaan suuqa shaqada ku samaynaynaa isbeddelkii ugu waynaa''
Waxaa maanta la furay kal-fadhiga baarlamanka Sweden ee Riksdag ee xilli-siyaasadeedka dayrta. Waxaa sidoo kale fardo karreetooyin xardhan jiidaya lagu keenay boqortooyada dastuuriga ah ee Sweden oo uu horkacayo Boqor Carl Gustaf Folke Hubertus. RW Sweden ee Stefan Löfven oo maanta qorshayaasha xukuumaddiisa hor geeyey kal-fadhiga Baarlamanka isagoo sheegay inay diiradda saari doonaan: shaqooyinka, cilimada, barwaaqo sooranka & amaanka.
LÖFVEN: ''Kaddib guusha Norway Scandinavia waxaa xukuma Xisbiyada S''
Tue, 14 Sep 2021 12:52:00 GMT+2
Dalka Norway, waxaa taladii la wareegey hoggaanka Xisbiga Shaqaalaha ee Jonas Gahr Støre. Waxaa hambalyo dirtay RW hore, Erna Solberg oo guuldarrada ku qiratay khudbad ay u jeedisey xisbigeeda muxaafidka ah ee Høyre oo helay 20.4%, halka uu ka guulaystey ee Arbeiderpartiet uu urursaday 26,1%. RW Sweden, Stefan Löfven ayaa u hambalyeeyey RW cusub ee Norway ee Jonas Gahr Støre oo uu saaxiibkii ku tilmaamay, isagoo sheegay in haatan ay Skandinavia ka taliyaan Xisbiyada S.
Haweenka ay ilmohoodu dilayaan oo soo batay sanadahan
Tue, 14 Sep 2021 11:11:00 GMT+2
5tii sanadood ee ugu dambeeyey, ugu yaraan 11 haween ah ayaa waxaa diley carruur qaan gaar ah oo ay dhaleen intii u dhaxaysey 2016-20, sida lagu baahiyey barnaamijka P1. 12 kiis oo ka mid ah guud ahaan 102 kiis oo ah haween lagu diley xiriir dhow iyo muran qoys ayaa ah haween uu diley cunug ay dhashay. - Xiraa arki maysid meel ka dhaca aad u bandhigan tahay, Christina Silverbern.
Toogashooyinka oo ku soo kordhay dalkan
Mon, 13 Sep 2021 15:31:00 GMT+2
Toogashooyinka xaafadaha dhismooyinka badan ayaa kor u kacay saddexdii sannadood ee ugu dambeeyay. Sidaas ayuu tusayaa tirokoobka booliska. Ilaa iyo sannadkii 2018.kii ayey 169 qofi ku dhinteen toogashooyinkan.
Ibrahim: "Magaalo wayn goolkan kuma gaareen"
Ibrahim Cumar wuxuu dalka ku yimid 16 jir, sannadkii 2013. Maanta waa 23 jir xirfaddiisu tahay farsamayaaqaan dayuuradaha qumaatiga u kaca. "Mustaqbalka waxaan rabaa inaan duuliye noqdo", sida uu sheegay Ibraahim mar aan kula kullaney degmada Boden.
Faraq u dhaxeeya gobolada dhanka tijaabada kansarka haweenka
Mon, 13 Sep 2021 13:00:00 GMT+2
Faraq weyn ayaa u dhaxeeya gobolada dhanka tirada haween ee tijaabada kansarka makaanka iyo naasaha mara. Sidaas ayaa laga ogaaday baadhitaan uu sameeyay ururka kansarka Iswiidhan oo eegay tirokoobkii 2018:kii iyo 19:kii. Dareenkeeygu waxaa uu la mid ahaa qof dil lagu xukumay, ayey sheegtay Sandra Gonsalvez oo laga helay kansarka makaanka.
Saida: Waa inuu xisbiga isbeddel badan la yimaadaa
Fri, 10 Sep 2021 15:49:00 GMT+2
Waxaa ka haray sannad doorashada dalka ka dhici doonto sebteember 2022. ”Waa in wax laga beddellaa siyaasadda Socialdemokraterna si uu xisbigu dalka u sii xukumo”, sida ay sheegtay Saida Hussein (S), oo ah xidhibaan deegaan. ”War looma hayo natiijada ka soo bixi doonto doorashada sannadka soo socda”, ayay tiri Mariam Yasin oo baratay culuunta siyaasadda.
Iswiidish u dhoofi kara Afqanistaan si ay u taageeraan talibaanka
Fri, 10 Sep 2021 14:36:00 GMT+2
Waxaa jirta khatar ah in muwaadiniin Iswiidhish ahi u dhoofaan dalka Afqaanistaan si ay ula garab dagaalamaan ururka argagaxisada ee talibaanka. Waa sida uu sheegay booliska amniga ee Säpo. Xaalada Afqanistaan ayaan saameeyn doonin darajada heerka tuhunka argagaxisada Iswiidhan.
Gobolada oo qorsheeynaya in ay iibsadaan shaqaale dheeraad ah
Fri, 10 Sep 2021 12:07:00 GMT+2
Gobolada dalkan ayaa qorsheeynayaa in ay iibsadaan shaqaale dheeraad ah. Sababta ayaa ah in la yareeyo safafka wakhtiga sugitaanka bukaanka oo dheeraaday intii lagu jiray corona. Qorshahu waxaa uu yahay in aanu yareeyno safafkan, ayuu sheegay Kenneth Backgård oo hogaamiya daryeelka caafimaad ee Norrbotten.
​Qoraal cad - Warka oo ku qoran iswiidhish fudud Raadiyaha Iswiidhan oo ku baxa iswiidhish fudud - Warar ka yimid raadiya iswiidhan loogu tala galay adiga ku cusub iswiidhan Warka telefishinka SVT oo ku baxa iswiidhish fudud - Warka oo ku qoran iswiidhish fudud kana yimid SVT. Waxey ku bexeysaa sidoo kale soomaali, iyo qoraal iniriisi ah.